1: Iindaba eziNomvuzo | Isiseko soMvuzo: Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya I-1 News Rewarding
Kuninzi okwenzekayo kwiThe Reward Foundation, ke sigqibe kwelokuba siqalise 'Iindaba ezinomvuzo' njengendibano yokujikeleza iindaba eziza kuvela kathandathu ngonyaka endaweni yekota. Sithumela i-tweet yonke imihla kangangoko kunokwenzeka kwaye senza namabali eendaba ngeveki nawo. Ukuba kukho nantoni na ongathanda ukusibona sigubungela, yitsho njalo. Zonke iimpendulo zamkelekile kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
IFund Lottery Fund
"Apple, Google, Facebook? Ngokuqinisekileyo bathengisa izidakamizwa "
Ukuzihlonela: Incwadi yokuHlola
Kude kangaka, uhambe ...
Ukudibanisa phakathi kweSono kunye noLwazi
Iingcamango ngaphakathi kobudlelwano
Imfundo yePalase yasePostike kunye neZakhono zePhepha kwi-PSHE
IZINDABA, IMIBONO NAMAKHUBA
I-Foundation Foundation ivuyiswe ukuvakalisa ukuba ifumene ibhaso evela Ukutshala imali kwiingcamango Ukusasazwa kweFund Lottery Fund. Iprojekthi yethu inesihloko esithi 'yiyiphi-ithi-on-the-tin' Ukukhulisa Ukwaziswa Ngeentlekiso Zonografi Ulwaphulo Phakathi Kobutsha eScotland. Injongo kukuphuhlisa izicwangciso zezifundo zezikolo njengenxalenye yeNkqubo yezeMfundo yezeMpilo kunye neNtlalo (PSHE).
Siza kugxila kumandla oononophelo ekuvuseleleni ingqondo kunye nefuthe kwimpilo yengqondo nangokwenyama, ukufikelela, ubudlelwane kunye nolwaphulo-mthetho. Siza kuthi sisayine iindlela zokuyeka i-porn kunye nokwakha ukomelela. Kuluvuyo kuthi ukuba neetalente zootitshala abambalwa kunye nabafundi ukuba basincede siphuhlise izinto ezonwabisayo, ezisebenzisanayo kunye nezihambelana neminyaka.
Funda eli libalaseleyo inqaku malunga nendlela i-Facebook eyiyo ngayo ingqondo yakho. I-Tech insiders ibonisa indlela abafana abakhulu abasebenzisa ngayo amathuba ethu okusikhusela ukusikhupha kwaye basigcine sibuyele. Benza iibhiliyoni kwaye thina, ngokukodwa abaselula, sinokuphelelwa lugxininisekile, sinoxhala kwaye singaneliseki ngobomi.
Sixakeke ngepottoliyo yethu yeengxoxo zevidiyo. Senza abatsha kunye nomdlali oselula kunye nozayo uRobbie Gordon waseScotland Wonder Foolsinkampani yezemidlalo kunye noMkristu McNeill, umqeqeshi okhuthazayo okhuselekileyo Elements of Welling. Besiqala nenkqubo ecothayo yokufunda indlela yokuhlela iividiyo. Isicwangciso sethu kukuba nolunye udliwanondlebe kwiwebhusayithi kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Siza tweet xa zikwi-intanethi.
Sithanda ukucebisa incwadi enhle kakhulu ebizwa ngokuthi Ukuba Nenceba Yothando - Yeka Ukuzibetha Uze Uhambe Ngesiseko Ekugqibeleni nguprofesa wophuhliso lomntu uKristin Neff. Sava uKristen ethetha ngencwadi yakhe kwintlanganiso yonyaka odlulileyo waza wachukumiseka. Kuye kwafuneka anqobe ezinye iingxaki zangempela ebomini bakhe ngoko akusiyo nje ingcamango. Le ncwadi inikezela isisombululo esinamandla sokulwa nokudakumba, ukuxhalaba nokuzigxeka okuza kuphila kwinkcubeko ecinezelekileyo nekhuphisanayo. Kukho iindlela zokuvavanya nokuvavanywa kunye nokulayishwa komculo kufumaneka mahhala. Incwadi ebandakanyekayo neyuncedo.
Ngokude kangaka, ukuhamba...
I-TRF ithe ndlelantle kuJamie Wright noDavid Martin, abafundi ababini ababekwe kwiYunivesithi yaseNapier kulo nyaka. Babesinceda kuphuhliso lwewebhusayithi yethu kwaye siyathemba ukuba ibazuzele amava omsebenzi aluncedo. Ngethamsanqa kubo kwinqanaba elilandelayo lomsebenzi wabo.
YINTONI IINQUBO ZOKUBA ZI ...
Kukho ngoku ubungqina ukuba ukubethwa liqabane kumnandi ngakumbi kunokubetha omnye umntu okanye wena. Ukubethwa kunciphisa ukubetha kwentliziyo. Le yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo yi-NHS njengenye yeendleko eziphezulu kunye neziphumo ebezingalindelekanga zamachiza. Idibanisa kakuhle noko sikwazi malunga nokuziphatha okubophelelayo. Yabona Apha kwinqaku elincamisayo elibizwa ngokuthi "Indlela Evilaphayo Yokuhlala Ethandweni" exelela ngakumbi ngomlingo wokuziphatha okubophelelayo.
Yiyiphi eyokuqala, i-porno okanye isohlwayo? Kule uphando abo babukela iphonografi babesengozini yokuba nesithukuthezi, kwaye abo babenesithukuthezi kunokwenzeka ukuba babukele iphonografi. Ezi zinto zifunyanisiweyo ziyahambelana nophando oludibanisa ukusetyenziswa gwenxa kweefografi kwimpembelelo / kwiimvakalelo ezimbi.
Iziphumo ze-porn kwizibini ezitshatileyo? Nazi ezinye izicatshulwa ezivela kwifayile ye- esibalulekileyo isifundo esitsha khokelwa nguPaul J. Wright:
"Ukukhetha ucalucalulo ukuya kwintlalo yesondo kunye nokwabelana ngokuxhatshazwa ngokwesondo kwadibaniswa kunye nolwaneliseko olungaphantsi kwesondo."
"Ngokuqhelekileyo ukusetyenziswa koononografi kusetyenziswa njengesixhobo sokuvuselela i-masturbation, ngakumbi umntu angagqithiselwa kwi-pornography ngokuchasene neminye imithombo yokuvusa isondo."
"Sifumene ukuba amadoda namabhinqa angaphantsi axabisa uxhulumaniso lwezocansi, ukwaneliseka koxhatshazo ngokwesini."
Ngo-Ephreli 2017, umthetho omtsha wokuziphindaphinda i-porn eScotland waqala ukusebenza phantsi Ukuziphatha kakubi nokuziphatha kakubi ngokwesondo 2016. Isigwebo esiphezulu sokubhengeza okanye ukusongela ukwazisa isithunzi esinobuhlobo okanye ividiyo i-5 iminyaka entolongweni. Ulwaphulo luquka imifanekiso ethathwe ngasese apho umntu wayenobude okanye engaphantsi kweengubo okanye ebonisa umntu owenza isenzo sesondo. Funda ngokugqithisileyo Apha.
IKomishoni yePalamente yaseScotland neZakhono ezishicilele ingxelo yayo ngezoSondo kunye noBudlelwane bemfundo. Abafundi bathi bafuna izifundo zihambe ngaphezu kwe-biology kwaye bathethe ngakumbi malunga nobudlelwane. I-Foundation Foundation ikulungele ukufaka isandla kwisisombululo. Ibhaso evela kwi-Big Lottery Fund iya kusinceda sikufezekise. (Jonga ngasentla) Iinkcukacha ezongezelelweyo kwiphepha lekomiti zingabonwa Apha.
Ufumana le imeyile ngenxa yokuba ukhethe kwiwebhusayithi yethu www.rewardfoundation.org.
Idilesi yethu yeposi yile: